Ngisifaka kanjani isicelo sezimo ezingalindelekile? | Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Izikhathi zokulinda zinde kakhulu kunokujwayelekile njengamanje
Ngenxa ye-coronavirus (COVID-19), okwamanje sithola inani eliphakeme lezicelo futhi sisebenza ngesibalo esiphansi sezisebenzi. Uma unokubhukha okungaphezu kwamahora angu-72 azayo, sicela usithinte uma kusondela usuku lwakho lokungena ukuze sisize labo abadinga usizo ngokushesha. Ukuze ushintshe noma ukhansele ukubhukha, iya ekhasini lakho lohambo noma ideshibhodi yokubungaza.
Iya kwesithi uhambo lwakho
Emuva ekhasini lokuqala losizo
Ngisifaka kanjani isicelo sezimo ezingalindelekile?
Qaphela: Uma udinga ukukhansela ukubhukha kwakho ngenxa ye-coronavirus (COVID-19), sicela uhloleisihloko sethu songakukhetha uma ukhansela .
Indlela okhansela ngayo
Uma kufanele ukhansele ngenxa yesimo esingalindelekanga ongenakusigwema:
Funda Umthetho wethu Wezimo Ezingalindelekile ukuze uhlole ukuthi uhlanganisiwe yini
Qiniseka ukuthi unanoma yimaphi amaphephambhalo adingekayo
Khansela ukubhukha kwakho kwamakhaya noma Okokuzithokozisa kwe-Airbnb
Uma ukubhukha kwakho kungaphansi kwesimo esingalindelekile esamukelwayo, uzokwaziswa ukuthi ukubhukha kwakho kufanelekela ukukhansela ngaphandle kwesijeziso, futhi uzobuyiselwa imali ephelele uma uyisivakashi.
Uma ukubhukha kwakho kungafaneleki ngokuzenzakalelayo, qhubeka ukhansele ukubhukha kwakho bese uxhumana nathi ukuze ufake isimangalo. Sizokuhola ezinyathelweni ezilandelayo, ezizohlanganisa ukuthumela noma yimaphi amaphephambhalo adingekayo nokulinda iqembu lethu ukuthi lihlole isicelo sakho sosizo. Izimangalo kufanele zithunyelwe kungakapheli izinsuku ezingu-14 kusukela kukhanseliwe.
Umthetho wezimo ezingalindelekile kanye ne-coronavirus (COVID-19)